Wararka laga soo xigtay AutoCAD, ArcGIS iyo Mashiinka Caalamiga ah - Geofumadas
Waa maxay New in AutoCAD, ArcGIS iyo Global Mapper
Ogast, 2012 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub
ArcGIS Plugin for AutoCAD
ESRI waxay soo bandhigtay qalab si loo arko xogta ArcGIS ee laga soo bilaabo AutoCAD, taas oo loola jeedo tabo cusub oo ku yaal Ribbon mana u baahnid inay haystaan ​​liisanka ArcGIS ama barnaamijka la rakibay.
Waxay la shaqaysaa AutoCAD 2010 versions AutoCAD 2012, ma aysan sheegin wax ku saabsan AutoCAD 2013. 2009 Build 200 Service Pack ayaa looga baahan yahay 1 ama noocyada hore.
Looma baahna in la heli faraxsan oo ku saabsan wax badan, waayo, ma akhriya layers caadiga ah sida WMS, WFS, MXD a badan ka yar ama ESRI Geodatabase. Waxa aad ka akhrisan waa xogta u adeegeen via ArcGIS Server, sidoo kale adeegyada network degaanka, Internet iyo layers ArcGIS online. Waayo, kuwa ku arkay masaafada u dhexeysa CAD iyo GIS, waxaan aqoonsanahay in ay tahay tallaabo muhiim ah oo riyo ah filayaa, ka AutoCAD ula falgalaan layers Kaapelitalo ka ArcGIS aan haysan si ay dajiyaan ama beddesho.
Shaqooyinku waa aasaas ahaan, khariidado lagu dhejiyo, lakabyo kala duwan, xirid, rogo, daahfurnaan, la tasho xogta xogta. Haddii adeeggu yahay mid la isku habeeyey, waad kala-beddeli kartaa macluumaadka tabeelaha iyo vektor-ka ee kaabe-yaasha shirkadda, laakiin waa in lagu qeexaa GIS-ga. Waxay aqoonsanaysaa saadaasha, labadaba feyl .prj iyo midka lagu magacaabo AutoCAD. Waxa kale oo aad kuxirin kartaa sifooyinka macluumaadka CAD iyo iyadoo Lisp aad wax ka dhexgali karto.
Gaar ahaan, inkastoo ay aasaasiga ah, waxa ay u muuqataa isku day fiican, sida ka hor, haddii aad isticmaasho AutoCAD Map ama Civil3D, lahaa si loogu badalo xogta dulinka in format billabo iyo tabular lumin.
Iyo maxaa yeelay waa bilaash, ma aha wax xun.
Download ArcGIS for AutoCAD
Waa maxay Khariidadda Global 14 ay keeni doonto
Bartamihii Sebtembar waxaa la bilaabi doonaa version 14 oo khariidad caalami ah la bilaabi doono, hal sano kadib markii 13 uu ka soo baxay waqtigaas ayaan la hadalnay.
Sure waxaa jiri doona maqaal dheeri ah, laakiin waxa aan ka dhignay qaybta Beta ee laga heli karo download, tan waa novelty:
In Mapper Global 13 ay ku jiraan kartida akhrinta ESRI Geodatabase. Hadda waxaanu isbedel ku sameyn doonaa si toos ah, ESRI ArcSDE labadaba, iyo sidoo kale ESRI hore iyo faylasha Shakhsiyeed ee Shakhsiyeed. Sidoo kale waxaa lagu sameyn karaa MySQL, Oracle Spatial, iyo PostGIS database.
A shaqeynayaan heer-taliska, ayaa wax badan oo hagaajin si button mouse ka, hadan xaq guddi macnaha ah waxaa la geeyay inay helaan joogtada caadi ah ama la xiriira waxa uu qofkaasi samaynayo.
Jiilka moodooyinka dijitalka ah, oo ahaa mid aad u macquul ah, maaraynta menus ayaa la hagaajiyay abuurista khadadka konka, isku dhafka dusha sare, jiilka basaska iyo qalabka kale.
Awoodda lagu xisaabinayo mugga inta u dhaxaysa laba dusha dhulka iyo sidoo kale xariiqyo dhinacyo ah si loo yareeyo dusha ayaa lagu daray.
Taageero loogu talagalay Adeegyada Adeegyada Muuqaalka Webka (WFS) ee heerka macaamiisha.
Waxaa loo dhoofin karaa CADRG / CIB, ASRP / ADRG, iyo faylasha Garmin JNX
Raadinta waxaa si gooni ah loo samayn karaa lakabka
Hadda waxaa suurtagal ah in la sameeyo hawlgalo aasaasi ah oo aan ku jirin barnaamijyada GIS sida caadiga ah, sida isbedelka bilaashka ah, iyada oo aan la qeexin xuduudaha, laakiin halkii ay ku duulin lahaayeen maaddaama lagu sameeyo CAD. Sidoo kale jarjar tiro badan oo xariiq ah, nooca Trim, ma aha arrin aan la jarin isla hal diyaarad.
Nuqul - dhoobo waxaa loo samayn karaa sida Manifold, dooro waxa aad rabto, raadi lakabka bartilmaameedka ah, ka dhig dhoobada iyo tag.
Waa inaanu aragnay waxa uu yahay, laakiin waxay ka hadlaan xisaabinta kharashka iibka xogta, oo ku salaysan aag xaddidan oo qeexaya qaraarka.
Dabcan, waxaa la rajeynayaa in qaabab badan oo cusubi ay imaan doonaan, waxa Miisaanka Caalamiga ah uu ku dhow yahay caymis la'aan, saadaashyo cusub iyo datum.
Laga soo bilaabo halkan waxaad ka soo dejisan kartaa qaybta beta, kaas oo lagu rakibay wadiiqo is barbar socda iyada oo aan saamaynayn mid hore oo aan ku rakibnay.
Post Previous«Previous Ku dhajinta faylasha waaweyn Google Drive
Post Next gvSIG Batoví, qaybinta koowaad ee gvSIG la soo bandhigay for EducationNext »
5 jawaabta "Wararkii ka yimid AutoCAD, ArcGIS iyo Mapper Global"
jorge quintero isagu wuxuu leeyahay:
Haddii aad awoodid, ka caawi barnaamijka ku rakibidda.
Givanildo Sosa isagu wuxuu leeyahay:
Buenas: waxaad isku dayi kartaa xiriirkan http://www.youtube.com/watch?v=p0MhE3kSLIY Waxaa jira sharaxaad aad u wanaagsan oo la isticmaalo (waa Ingiriisi).
Artur Castillo isagu wuxuu leeyahay:
Hello, aad u xun, aad leedahay koorso ama buugaag ee Arcgis for AurtoCad 2010-2012 tan iyo markii aan soo dejiyey iyo rakibay laakiin ma garanayo sida loo isticmaalo. Waxaan rajeynayaa inaad adigu i caawinkartid saaxiib!
hello, waxaad u diri kartaa talaabooyinka si loogu rakibo khariidadda Global for 64 byts ... mahadsanid